Turkey: Tirada Dadka Ku Dhintay Dhul-gariirkii Izmir Oo Korortay Iyo Wararkii Ugu Danbeeyey | Hayaan News
Turkey: Tirada Dadka Ku Dhintay Dhul-gariirkii Izmir Oo Korortay Iyo Wararkii Ugu Danbeeyey
October 31, 2020 - Written by admin
Turky(Hayaannews): Tirada dadka ku dhintay dhul gariir xoogan oo Jimcihi shalay ka dhacay magaalada Izmir ee dalka Turkiga ayaa gaadhay ugu yaraan 26 qof, halka dhanka dalka Greece uu isna dhul-gariirku ku dilay laba qof.
Kooxaha badbaadada ayaa dadaal xoog leh ugu jira sidii ay burburka hoostiisa uga soo saari lahaayeen dad la la’yahay oo ay u baddan tahay in ay ku hoos jiraan burburka guryaha dumay.
Illaa iyo hadda waxaa la soo badbaadiyay hooyo iyo saddex carruur ah oo ay dhashay, kuwaasoo muddo ku dhaw 18 saacadood ah ku hoos jiray burburka dhismayaal ku dumay magaalada Izmir oo ahayd meesha uu sida aadka ah ugu dhuftay dhul-gariirku.
Shaqaalaha gurmadka waxa ay sheegeen in ay hadda dhameystireen baadhiaanka 8 guri oo uu dhul-gariirku dumiyay, halka ay u hadheen 9 kale oo burbursan.
In ka baddan 800 oo qof ayaa ku dhaawacmay dhul-gariirkii shalay ka dhacay magaalada saddexaad ee ugu weyn Turkiga ee Izmir.
Dhul-gariirka ayaa burburiyay ugu yaraan 20 dhisme oo ku yaal magaalada Izmir, taasoo argagax ku abuurtay magaalada isla markaana kicisay mowjado hirar ah oo ku soo dhacay deegaannada xeebta iyo jasiiradaha.
Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegtay in labadeeda waalidba ay wali burburka ku xayiran yihiin. “Ma aanan helin wax war ah. Ma aanan helin wax war ah,” ayay haweeneydan u sheegtay Reuters, mar wax laga weydiiyay isku dayga ay ku doonayso inay ku hesho xogta waalidkeed.
Wasiirka deegaanka ee Trukey Murat Kurum ayaa sheegay in ilaa iyo hadda 100 qof la soo badbaadiyay.